Imveliso ethandwayo yechungechunge lweLancôme Visionnaire ibuya ngokuphangaleleyo kwifom ehlaziyiweyo. Ukwakhiwa okuphuculweyo kwe-Nuit Beauty Sleep Perfector kudibanisa ukulula kwe-gel ukuthungwa kunye nokusebenza kwefuthe leoli ukwenzela ukuba kube lula ukuphucula isikhumba. I-Nano-capsules yeoli, isatshalaliswa kwi-foamy content, ingene kwiindawo ezinzulu ze-dermis, izalisa izakhi kunye nokubuyisela ibhalansi yamanzi.
Ifomula entsha ye-ukhilimu iqukethe i-MDH jasmonate-isiphumo se-jasmonic acid ebandakanyekayo kwinkqubo yokuvuselelwa. I-extract yegolide ye-laminaria inceda ukugqithisa ukukhutshwa kwesikhumba, ukuphelisa iziphene ezibonakalayo - ubomvu nokukhwabanisa. I-phyto-complex complex of ceramides, i-soybeans, ivule iinqumlo kunye neoli ye-currant ebuyayo ibuyisela ukukhanya kwempilo kunye nokubonakala kakuhle kwesikhumba.
Ukusetyenziswa rhoqo kwe-Visionnaire Nuit Beauty gel ebusweni, entanyeni kunye nasezindaweni ze-décolleté kuya kuqinisekisa ukubuyiswa ngokupheleleyo kwesikhumba ngexesha lokuphumla ebusuku, ukudala umqobo wokukhusela kwiinguqu ezinxulumene neminyaka.
Umfaki sicelo omncinci uqinisekisa ukuba kulula ukusebenzisa i-Visionnaire gel
Amafutha, iiprotoextracts kunye ne-bio-complexes zezinto ezisebenzayo - isiseko sokuveliswa kwenguqu ye-cream yaseLancôme Visionnaire
Ubumnandi beblogi Zoe uNewlove malunga neMiboniso Nuit Beauty Sleep Perfector: "Uya kuneliswa ngolu hlobo kwisibuko"
Kate Winslett kunye noLupita Niongo - ubuso benkampu yokukhangisa i-Visionnaire Nuit
I-Technique yokwakha ubuso
Ii-liposomes kwizonyiso: iziphumo kunye nekhono
Ukukhahlaza emehlweni ebhinqa
Unokususa njani iifolda ze-nasolabial
Indlela yokubeka itafile yeKrismesi?
Isonka se Buckwheat
USergei Lazarev ubonise ingoma ye-teaser ye-Eurovision Song Contest 2016
Biography ka-Andreichenko Natalia
U-Ksenia Sobchak uxelele ukuba ngababhankqalazi bemali abanikezwa "emtshatweni wegolide"
IHoroscope yeGemini-Abafazi ngo-Apreli 2017
Ukufundisa isiNgesi ehlobo ephesheya
Ngaba iSneakers Isabel Marant zidla ntoni?